တို့အရေး… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Poetry » တို့အရေး…
Posted by johnnydeer on Jan 8, 2013 in Poetry |9comments
.နွားကျောင်းသား ဘ၀လို အေးချမ်းသာယာဖို့…
ဆရာမောင်ကြည်သော်(ကောလင်း)ရဲ့ ဆန္ဒအရ တင်ပြပေးရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်….
သူ့အရေး .. တို့(ဒို့)မတွေး…။ ။
တရုတ်မယား မဖြစ်စေရေး ”
အင်း သူရေးတဲ့ပုံက မြန်မာထီး က တရုတ်မ ကိုယူရင်တော့ ၊
ပြဿနာ မရှိမယ့် ပုံပဲ ။
မြန်မာ တွေရဲ့ ဘဝ ကိုတော့ စာနာမိပါတယ် ။
သူတို့ခမျာ ကိုယ့် နိုင်ငံမှာ ကိုယ် နေပြီး ၊
ဆင်းရဲသား ၊ အနှိမ်ခံ ဘဝ ရောက်နေရှာသလိုပဲကိုး ။
ဘယ်သူက ဒီ ဘဝ ကြိုက်မလဲလေ ။
အမှန်ကတော့ ၊ ဘယ်သူမပြု မိမိ မှုပါပဲ ။
မြန်မာတွေ ဆင်းရဲ ၊ ပျင်းရိ ၊ ဥာဏ်တုံး နေရင်တော့ ၊
အော်ချင်သလောက်အော် ၊ အော်ချင်တာအော် ၊
ဘာမှ ထူးလာမယ် ၊ အကျိုးရှိလှမယ် မထင်ပါဘူး ။
အရင်ဆုံး မပျင်းအောင်လုပ်ပါ ၊
မပျင်းရင် အသိဥာဏ်ထက်လာ ချမ်းသာလာပါမယ် ။
စိတ်ချပါ ချမ်းသာလာရင် ကျွဲကူးရေပါ အကုန် တဖြေးဖြေး မြင့်လာမှာပါ ။
စင်္ကာပူ မ တွေဟာ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် ပြီးခါစက
ဆပ်ပြာတစ်ခဲ အတွက် ညအိပ်ခဲ့ရတာပါ ။
အခု စ လုံးမတွေ မြန်မာတွေကို ဘယ်လို ဆက်ဆံလည်း အသိသာကြီးပါ ။
တရုတ်မ တွေ ဗမာထီး တွေကို ယူခဲတယ် ဆိုတာက ၊
လူမျိုးရေးကြောင့် နဲ ပါတယ် ။
အဓိက က ဆင်းရဲမှာ ကြောက်လို့ပါ ။
ဥပမာ ပေးရရင် အဘ ကိုယ်တိုင်ကိုပဲ ပေးရမှာပဲ ၊
အဘ လည်း တရုတ် ၇၅ % ပါပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် အဘ ထက် အသိဥာဏ်လဲသာ ပိုလဲချမ်းသာတော့လည်း ၊
အဘ မိန်းမ မြန်မာမ စစ်စစ်ကြီးကို အဘ လည်း ယူတာပါပဲကွယ် ။
“ဥပမာ ပေးရရင် အဘ ကိုယ်တိုင်ကိုပဲ ပေးရမှာပဲ ၊
အဘ မိန်းမ မြန်မာမ စစ်စစ်ကြီးကို အဘ လည်း ယူတာပါပဲကွယ်”
ကဲ… တိုင်ပြောလိုက်တော့မယ်။ အဘ ပြောတဲ့အထဲမှာ အချစ်ဆိုတာမပါဘူးဆိုပြီး
အဘဖော ဖက်က ရှေ့နေ လုပ်တာ လုံးဝ(လုံးဝ) မဟုတ်ရပါ။
ဆယ်ကျော်သက် အရွယ်မှာ ရည်းစားထားဖို့ စိတ်မဝင်စားဘဲ အလုပ်၊ ပညာ လိုမျိုး ကို ပိုပြီး အားသန် နေတဲ့ သူမျိုး ဆိုရင်တော့ “အချစ် ဆိုတာ ဘာလဲ”လို့ ပြန်မေးကြလိမ့်မယ်။
တကယ်တော့ အိမ်ထောင်သည် ဆိုရာမှာ သည်းသည်းလှုပ် ချစ်ပြ ရည်းစားဖြစ်ပြီး ယူမှ အချစ် ဆိုတာ ရှိတာ မဟုတ်ပါ။
သမီးရည်းစားအချစ် ဆိုတာကို ဂရုမစိုက်ဘဲ / မသိဘဲ လက်ထပ်တာနဲ့
ဂုဏ် နဲ့ ချမ်းသာမှု အတွက် ရှိပြီသား ရည်းစားကို ထားခဲ့တာ နဲ့ မတူပါဘူး နော။
မန့်ချင်လွန်းလို့ ဝင်မန့်တာ။ Post နဲ့ မဆိုင်ဖြစ်ရင် စောဒီး။
အချစ် ပါခဲ့တဲ့ ဆိုရင်-လဲ ဘယ်သူ့လင်၊ ဘယ်သူ့ မယား ဖြစ်ဖြစ် အရေးမကြီးပါဘူး။
လူမျိုး အချင်းချင်းမှ ယူရမယ် ဆိုရင်လဲ ရွာလို ဖြစ်နေပြီ ဖြစ်တဲ့ ကမ္ဘာကြီးမှာ လူ့အခွင့်အရေးပိတ်ပင်တာဘဲ။
ကဗျာရေးတဲ့ ဆရာကြီးမောင်ကြည်သော်ကတော့ အသက်တော်တော်ကြီးပါပြီ…သူ့ကဗျာလေးတွေ တင်ပေးစမ်းပါကွာ ဆိုလို့ တင်ပေးတာပါ…ကဗျာပါ အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာမှ မပြောလိုပါဘူး…ဒါပေမယ့်…
ဘာမှ ထူးလာမယ် ၊ အကျိုးရှိလှမယ် မထင်ပါဘူး ။………လို့ရေးထားတဲ့ကောမန့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ဗမာတစ်ယောက်အနေနဲကတော့ ရှင်းရပါမယ်…ဆိုးဝါးလှတဲ့ဦးနေ၀င်း..ဦးသန်းရွှေ အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၅၀ အတွင်းမှာ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ ညံ့အောင်တုံးအောင် အ အောင် လုပ်ထားခံခဲ့ရတဲ့ ဗမာတွေ ကို တဖက်သတ်တော့ အပြစ်မတင်သင့်ဘူးထင်တယ်…ဒီလိုပြောစတမ်းဆို တရုတ်တွေကော အင်္ဂလိပ်နဲ့ ဂျပန် အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ နှစ် ဘာမှမကြာတဲ့ ကာလ တွင်းမှာ တရုတ်ဘိန်းစားတွေ ဖြစ်သွားတာ ဘာပြောဦးမှာလဲ…ဗမာပြည်ကိုငတ်လို့ ခွေးပြေး ၀က်ပြေး ပြေးလာကြတာကော ဘယ်သူတွေပါလဲ…ကျန်တာတော့ ပြောမနေနဲ့..ခင်ဗျားတို့ တရုတ်ပြည် ဦးနေ၀င်းနဲ့ ဦးသန်းရွှေ အုပ်ချုပ်ခိုင်းလိုက် …နှစ် ၅၀ မပြောနဲ့…၁၀နှစ်အတွင်း ဖျာလိပ်ပတ်နေရလိမ့်မယ်…
ဒီလိုပဲ.. အပြန်အလှန်ဝေဖန်ရင်း.. Brainstorming လုပ်ယူသွားမှာမို့ပါ..
အွန်လိုင်းအားသာချက်က.. ကဗျာအပေါ်.. စာအပေါ်.. တိုက်ရိုက်…ဆွေးနွေးဝေဖန်လို့ရတာပါပဲ..
အဲဒီအပေါ်.. ဆွေးနွေးသူတွေအပေါ်.. သူတို့ပြောတာတွေအပေါ်..အမှန်/အမှားရယ်လို့.. မယူစေချင်ပါ..
ကျုပ်က..” ငြင်းခုန်ခြင်းအနုပညာလို့..” ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်..
(အောက်မှာ..အင်တာနက်ထဲက တွေ့တဲ့.. ဆရာ့ကဗျာတပုဒ်ထပ်တင်ပေးလိုက်တယ်.. )
ငါ တစ်ခါမှ လှည်.စောင်းမကြည်.ဘဲ
*နောက်တစ်နေ. နံနက် “နေ” အထွက်
အဝတ် အစား အမြန်လဲ
ကိုယ်ကလည်း ပြန်ပြီး အစဉ်အလာ နှုက်ဆက်
ငါ.အဝတ် အစား ငါပြန်ကြည်.မိ
ဖြူစိမ်းဝတ်စုံ ဝတ်ခဲ.မိသကိုး ……။
၀န်ခံပါတယ်…ဗမာပဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မာပဲဖြစ်ဖြစ် နှိမ့်ချတဲ့လေသံတွေ..စော်ကားတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေ ကြားရတိုင်း မြင်ရတိုင်း စိတ်ထဲ ထောင်းကနဲ ဒေါသထွက်သွားတတ်ပါတယ်…
ဒီ့ပြင်တိုင်းပြည်မှာ မြန်မာတွေ ဒုက္ခတွေ ရောက်နေကြတာတွေ ကြားရတော့လဲ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်…ကန်တိုင်းရှုံးတဲ့ မြန်မာ ဘော့လုံးအသင်းတောင် တခါတလေ ရှုံးမယ်ဆိုတာ သိစိတ်က သေချာပေါက်သိနေပေမယ့် မသိစိတ်ကနေ နိုင်စေချင်နေတာ….ဒါတွေ အားလုံးပေါင်းလိုက်တော့ မျိုးချစ်စိတ်လို့ပဲ ပြောရမလားမသိဘူးနော…